« Ahazoana hasambarana ny miasa amin-kerim-po » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Kapoaka mesure d’unité dans le commerce au quotidien à réformer? il y a 9 heures
« Samy nantsoin’Andriamanitra tsirairay isika… » il y a 1 jour
Fiofanana andiany faha 16 ho an’ny mpampiofana mpanampy il y a 3 jours
Aza avela ho tany lavitra andriana ny Kaominina Ambanivohitr’i Solila il y a 3 jours
Faha 150 taona nidiran’ny finoana katolika tao Fianarantsoa il y a 4 jours
Les Sakalava et Antandroy au bord d’un rude conflit communautaire à Tsaramandroso il y a 4 jours
Famine et pandémie: l’alarme au sud de Madagascar il y a 4 jours
Tambajotra mafia, manondrana harem-pirenena ! il y a 4 jours
Sur les traces du nouveau PM il y a 5 jours
Famangiana hafakely... il y a 6 jours
« Ahazoana hasambarana ny miasa amin-kerim-po »
Efa eo andalam-pandinihana ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainan'ny Gazety Lakroan'i Madagasikara isika izao. Ho avy tsy ho ela izany ny fotoana afahantsika mifandray. Izahay mampita ny vaovao avy aminareo ary ianareo miara-manabe ny mpamaky. Samia ho tahin'Andriamanitra isika rehetra.
Alahady 15 novambra 2020
Alahady Tsotra 33A
Oh. 31, 10-13. 19-20.30-31 ; 1 Tes. 5, 1-6 ; Mt. 25, 14-30
Madiva hifarana ny taona litorjika. Hafatrafatra farany ihany koa no apetrak’i Jesoa amin’ireo mpianany mba ho vonona lalandava eo am-piandrasana ny fiaviany, araka ny fanoharana momba ny virjiny folo heno tamin’ny evanjely tamin’ny heriny. Tsy hoe fahavononana miandry fotsiny anefa, hoy ny evanjely androany, fa fahavononana arahin’asa amin-kerim-po hampamokatra ireo fanomezam-pahasoavana noraisina. Oharin’i Jesoa amin’ny talenta izany fanomezam-pahasoavana izany eto. Fanomezana natao hampitomboina fa tsy ho kobonina na halevina fotsiny. Zary lasa fiteny mahazatra ny olona mantsy ny hoe « amndevin-talenta »!
« Ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa, ary ny anankiray iray » Samy nanankinan’ny tompony « talenta » araka ny fahaizany avy ny mpanompo telo, hoy ny fanoharana. Ny talenta moa araka ny fizotran’ny tantara eto dia vola (sandaina ho an-tapitrisa maro tokoa amin’ny vola malagasy ankehitriny). Ireo nomena talenta dimy sy talenta roa dia samy nampamokatra izany zato isan-jato avy, ka afaka nanolotra talenta dimy sy talenta roa ambonin’ireo napetraka tamin’izy ireo. Ilay nomena talenta iray kosa dia tsy mba nampitombo ny nomena azy fa nandevina izany sy namerina azy tamin’ny tompony.
« Tsara izany, ry mpanompo tsara sy mahatoky…, noho ianao nahatoky tamin’ny kely, dia hataoko mpitantana ny be ianao: miaraha mifaly amin’ny tomponao ». Mitovy hatrany ny valinteny sy ny valisoa nataon’ny tompom-panànana tamin’ireo anakiroa nampamokatra ny volany. Mpanompo tsara sy mahatoky izy ireo. Tsara sy mahatoky satria tsy nanararaotra ny tsy naha-teo ny tompony, na sanatria nanodikodina ny vola, na nandanilany izany, fa namerina izay napetraka tamin’izy ireo ary nanome ny tombony rehetra ihany koa aza. Eny, ahazahona hasambarana ny miasa amin’kerim-po.
« Mpanompo ratsy sady kamo…, tokony ho napetrakao tany amin’ny mpampanàna ny volako, ary rehefa tonga aho dia nandray ny ahy mban-janany ». Miavaka kosa ny valinteny nahazo ilay tsy mba nampamokatra ny talentany. Mpanompo ratsy sady kamo izy. Nihevitra ny tompony ho olona lozabe, mijinja amin’izay tsy nafafiny, manangona amin’izay tsy nanahafany. Hita àry amin’ity mpanompo farany ity fa tsy hoe tsy marina izy, satria naveriny ara-dalàna izay nomen’ny tompony azy, fa ny fiheverany sy ny fitsarany ambony ihany ny tompony ho olona mahatahotra, loza be ary mpanambàka, kosa naha mpanompo ratsy sy kamo azy. Indrisy, tsy ahazahoana hasambarana ny miasa tsy amim-pitiavana...
« Izay manana no homena, ka hanam-be izy ». Eto vao tena miharihary ny toetran’ilay tompom-bola. Tsy olon-doza, araka ny fiheveran’ilay mpanompo fahatelo izy, fa olona hentitra tokoa amin’ny fitantanana. Nony niverina izy dia « nampamoaka azy ireo ny amin’ny volany ». Tompo tsara sy malala-tanana ihany koa anefa izy. Nafoiny ho an’ireo mpanompo tsara sy mahatoky avokoa ny volany miaraka amin’ny zana-bola rehetra. Mbola nataony mpiara-mitantana ny fananany ihany koa aza izy ireo sady nasainy hiara-paly aminy. Ary na dia ilay talenta iray tsy namokatra ihany koa aza dia mbola nomeny ilay mpanompo efa nahazo talenta folo… Eny, ahazahoana hasambarana tokoa ny miasa ammin-kerim-po...
Ilay Andriamanitra Ray be fitiavana dia manankina amin’ny olombelona ny fitantanana izao tontolo izao. Maro ny fanomezana-talenta nomen’Andriamanitra Ray ny olombelona na dia mpanompony fotsiny ihany aza izy ireo. Ny mpanompo ratsy sy kamo dia ireo izay manao tsinontsinona ny fanomezam-pahasoavana noraisina sy mihevitra an’Andriamanitra Ray ho lozabe sy mahatahotra ka tsy mba manao na inona na inona akory. Ireo mpanompo mahatoky sy tsara kosa dia mahatakatra ny hasarobidin’ny fanomezam-pahasoavana ka mampitombo sy mampivelatra azy.
« Sambatra izay rehetra matahotra ny Tompo, izay mizotra fehizay amin’ny làlany. Eny, ahazoanao tombon-tsoa ny asanao: hasambarana moa ny anao » (Sal. 127, 1-2). Eny, ahazahoana hasambarana tokoa ny miasa amim-kerim-po.
Réforme en vue : Kapoaka mesure d’unité dans le commerce au quotidien à réformer? - il y a 9 heures
Teny Mahavelona : « Samy nantsoin’Andriamanitra tsirairay isika… » - il y a 1 jour
Finoana sy tantara : Faha 150 taona nidiran’ny finoana katolika tao Fianarantsoa - il y a 4 jours